Onye enyemaka Google na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ: mata egwu | Androidsis
Google nnyemaaka e eze ẹkenam afọ gara aga na mbata nke mbụ Mere site Google igwe, ma ọ were ihe karịrị otu afọ ịmụ asụsụ ọhụrụ, dị ka Spanish. Ọ dabara nke ọma, kemgbe November 1 gara aga, onye enyemaka Google na-ama ama Spanish ma obere nke nta ọ na-eru ndị njedebe niile dakọtara.
Google choro nke ahu ka anyị gbasaa ojiji anyị nke ọkachamara ya mere anyị anaghị agwa gị ka ị gwa anyị etu ihu igwe dị, tọọ mkpu, ma ọ bụ gwa anyị ma anyị nwere ozi-e ọhụụ ọhụụ. Iji gbaa anyị ume ka anyị jiri ya, onye enyemaka ahụ anatala ọrụ ọhụụ nke na-enyere anyị aka ịmata abụ ndị na-ada gburugburu anyị.
Ka Google Assistant mara otu egwu, anyị enweghị ike ime ruo ugbu a na Shazam, kama ọ bụ anyị kwesịrị ịjụ ya "Kedu egwu bụ nke a" ma ọ bụ "Kedu abụ na-egwu?" ma ka onye na-enyere ya aka rụọ ọrụ ya na-egbughị mkparịta ụka ahụ. Nsonaazụ ọ na-enye anyị ga-egosi anyị ọ bụghị naanị aha egwu ahụ na ọba egwu ọ dị na ya, mana ọ ga-enyekwa anyị ohere igosi egwu ahụ, zụta ya, nke ọrụ egwu egwu dị na ya na mgbakwunye na-egosi anyị njikọ ihe nkiri gọọmentị ma ọ bụrụ na ọ dị na YouTube.
Dị ka ọ bụ omenala na ụdị mmalite a, yana yana Google Assistant, Njirimara a ka nwere ike were ụbọchị ole ma ole iji dị na ọnụ niile nke taa dakọtara na onye inyeaka a, nke bụ ndị niile ejiri njikwa gam akporo jikọtara ma ọ bụ karịa karịa 6.0, nwere ma ọ dịkarịa ala 1,5 GB nke RAM na mkpebi ihuenyo nke 720p.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye enyemaka Google na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ: chọpụta abụ
Nweta doogee mix 2 nke naanị $ 199